Ngwa ihe ndozi China Combo Decoiler, Ihe ndozi igwe eji achọ ụlọ, Decoiler Cum Straightener, Manual Decoiler Straightener, Uncoiler CumStraightener Factory.
Nkọwa:Combo Uncoiler Straightener, Decoiler Straightener jikọtara ọnụ, Decoiler Cum Straightener,Manual Decoiler Cum Straightener,Decoiler Straightener 2 IN 1 igwe,Nnukwu Nchịkwa Decoiler Cum Straightener
Home > Ngwaahịa > Decoiler Straightener > Combo Decoiler Straightener
Ngwaahịa nke Combo Decoiler Straightener , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Combo Uncoiler Straightener , Decoiler Straightener jikọtara ọnụ suppliers / factory, wholesale high-quality products of Decoiler Cum Straightener R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Karfe igwe igwe anaghị agba nchara igwe  Kpọtụrụ ugbu a
Igwe igwe kwụ otu ebe na igwe anaghị agba agba  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwaọrụ igwe anaghị agba nchara  Kpọtụrụ ugbu a
Igwe eji ọla kọpa kee ihe ndozi na igwe kwụ ọtọ  Kpọtụrụ ugbu a
Decoiler Straightener 2 na 1  Kpọtụrụ ugbu a
Decoiler na Straightener Systems  Kpọtụrụ ugbu a
Ihe eji eme ihe eji achọ mma  Kpọtụrụ ugbu a
Decoiler Straightener  Kpọtụrụ ugbu a
Kọmpat Dedị Decoiler Cum Straightener  Kpọtụrụ ugbu a
Ejikọtara Uncoiler Straightener Machine  Kpọtụrụ ugbu a
Kọmpatetị Decoiler Straightener 2 n'ime 1  Kpọtụrụ ugbu a
Coil Decoiler na Straightener Maka Eletrọniki  Kpọtụrụ ugbu a
2 Na 1 Decoiler Straightener Machine  Kpọtụrụ ugbu a
Akpụkpọ ụkwụ dị elu akpaghị aka na igwe eji akpọrọ Uncoiler  Kpọtụrụ ugbu a
Ngwaọrụ Decoiler na Igwe Ọdụdọ  Kpọtụrụ ugbu a
Combo uncoiler larịị igwe  Kpọtụrụ ugbu a
Kọmpatetị Decoiler Cum Straightener Machine  Kpọtụrụ ugbu a
Steel Coil Decoiler Straightener  Kpọtụrụ ugbu a
Mgbako DECO ILER STRAIGH TENER MACHINE A na-eji ihe ndozi na ihe ndozi nwere ike ịrụ ọrụ n’agbata obosara na 200 ruo 600 mm, 0.3 mm ka 4.5 mm nke eji mpempe akwụkwọ mkpuchi 500 n'arọ na 2000 n'arọ nke nwere nkwalite ntuziaka. O nwere mpempe...
DECOI LER nnennen ENER igwe A na-eji ihe ndozi na ihe ndozi nwere ike ịrụ ọrụ n’agbata obosara na 200 ruo 600 mm, 0.3 mm ka 4.5 mm nke eji mpempe akwụkwọ mkpuchi 500 n'arọ na 2000 n'arọ nke nwere nkwalite ntuziaka. O nwere mpempe 7 na-agbatị...
Karfe igwe igwe anaghị agba nchara igwe
STEEL COIL MANUAL UNWINDING LEVELING MACHINE Karfe igwe igwe anaghị agba nchara igwe nwere ikike ịrụ ọrụ n’agbata oghere 200 ruo 600 mm, obosara 0.3 ruo 4.5 mm nke iji mpempe akwụkwọ mkpuchi 500 n'arọ ruo 2000 nke a na-ebuwanye mgbasa. O nwere...
Igwe igwe kwụ otu ebe na igwe anaghị agba agba
AKWACKWỌ AH COROL OLB WITHROL AHOLROL EGO NA-AGBANWE Ya Igwe eji eriri igwe na - eke ihe mkpuchi na igwe uncoiler nwere ike ịrụ ọrụ n’agbata obosara na 200 ruo 600 mm, 0.3 mm ka 4.5 mm ọkpụrụkpụ na iji mpempe akwụkwọ mkpuchi 500 n'arọ ruo 2000...
Ngwaọrụ igwe anaghị agba nchara
EB DER CO COB DER DE COB DER DE ATEB DER DE ANDB ANDR AND N'ANDLỌ AH AND Mpempe igwe mkpuchi igwe anaghị agba nchara na igwe kwụ ọtọ nwere ike ịrụ ọrụ n'etiti 200 ruo 600 mm mpịakọta, 0.3 mm ka 4.5 mm ọkpụrụkpụ na itinye 500 kg na 2000...
Igwe eji ọla kọpa kee ihe ndozi na igwe kwụ ọtọ
Ọla kọpa warara eriri igwe Deco ILING STRAIGH TENING igwe Igwe ọla kọpa a na-eji ọla kọpa na-agbatị ma na-akwụ ọtọ na-arụ ọrụ dị n'etiti 200 ruo 600 mm mpịakọta obosara, 0.3 mm ka 4.5 mm ọkpụrụkpụ na iji mpempe akwụkwọ mkpuchi 500 n'arọ ruo...
Decoiler Straightener 2 na 1
Deco ILER nnennen ENER 2 NA 1 A na-eji ihe ndozi na ihe ndozi nwere ike ịrụ ọrụ n’agbata obosara na 200 ruo 600 mm, 0.3 mm ka 4.5 mm nke eji mpempe akwụkwọ mkpuchi 500 n'arọ na 2000 n'arọ nke nwere nkwalite ntuziaka. O nwere mpempe 7...
Decoiler na Straightener Systems
Ihe ndozi DEC OILER NA SISET A na-eji ihe ndozi na ihe ndozi nwere ike ịrụ ọrụ n’agbata obosara na 200 ruo 600 mm, 0.3 mm ka 4.5 mm nke eji mpempe akwụkwọ mkpuchi 500 n'arọ na 2000 n'arọ nke nwere nkwalite ntuziaka. O nwere mpempe 7...
Ihe eji eme ihe eji achọ mma
HYDRAULIC DEC OILER STRAIGHTENER A na-eji ihe ndozi na ihe ndozi nwere ike ịrụ ọrụ n’agbata obosara na 200 ruo 600 mm, 0.3 mm ka 4.5 mm nke eji mpempe akwụkwọ mkpuchi 500 n'arọ na 2000 n'arọ nke nwere nkwalite ntuziaka. O nwere mpempe 7...
Mmekorita DE COILER oru Mkpokọta Decoiler straightener sistemụ nwere ikike ịrụ ọrụ n'agbata oghere 200 ruo 600 mm, obosara nke 0.3 ruo 4.5 mm na mpempe akwụkwọ mkpuchi 500 n'arọ na 2000 n'arọ nke nwere nkwalite ntuziaka. O nwere mpempe 7...
Mayflay Decoiler Straightener na-eji ezigbo kọntaktị eletriki eletrik na akụkụ eletrik dị mma, ndụ ọrụ ogologo Kwesịrị ekwesị maka ihe ọkpụrụkpụ 1.0-6.0mm, ahaziri maka ịchekwa ohere na ọrụ dị mfe, dabara adaba maka mmepụta dị iche iche, ngwa ngwa...
Kọmpat Dedị Decoiler Cum Straightener
Usoro kompeni Dedị Mgbakọ Decoiler Cum Straightener bụ Single Spindle Decoiler yana ebumnuche Straightener dị n'ihu ya. Njirimara nke sistemụ ahụ bụ na dịka a na-etinye n’elu otu ntọala ahụ, itinye ya n’otu n’otu na-edobe oghere na oge nrụnye. Ọ...
Ejikọtara Uncoiler Straightener Machine
Ejikọtara Uncoiler Straightener Machine agbakọtara na uncoiler na straightener, imewe nchekwa oghere, eji ọtụtụ ebe na igwe eji akuko stamping. N'iji arụmọrụ dị elu dị elu na sistemụ arụmọrụ dị mma, ịkwado igwe 2 n'ime 1 bụ nhọrọ kachasị mma...
Kọmpatetị Decoiler Straightener 2 n'ime 1
Kọmpatetị Decoiler Straightener 2 na 1 ka amara maka mkpuchi mkpuchi kachasị mma na ọrụ ịgbatị . Ndị ọzọ nke 2 Na 1 Decoiler Straightener Machine 1. A na-etinye igwe dị larịị na igwe nri n’otu usoro ikpo okwu, nke nwere ike belata igwe nri ya na...
Coil Decoiler na Straightener Maka Eletrọniki
Coil Decoiler na Straightener Maka Eletrọnikrị ka amaara maka ọrụ mkpuchi ya kachasị mma na ijikọ ọrụ. Ndị ọzọ nke 2 Na 1 Decoiler Straightener Machine 1. A na-etinye igwe dị larịị na igwe nri n’otu usoro ikpo okwu, nke nwere ike belata igwe nri ya...
2 Na 1 Decoiler Straightener Machine
2 N'ime 1 Decoiler Straightener Machine ka amaara maka ọrụ mkpuchi kachasị mma na-emechi emechi. Ndị ọzọ nke 2 Na 1 Decoiler Straightener Machine 1. A na-etinye igwe dị larịị na igwe nri n’otu usoro ikpo okwu, nke nwere ike belata igwe nri ya na...
Akpụkpọ ụkwụ dị elu akpaghị aka na igwe eji akpọrọ Uncoiler
Automatic High Precision Coil Straightener na Uncoiler iIntigrated na uncoiler na straightener , oghere ịchekwa oghere, dị mma maka ụdị ụdị mpempe akwụkwọ ọla niile. Na akpaghị aka megharia oge nri dịka ọpụpụ ngwa ngwa. Leveler na acho uzo kwesiri...
Ngwaọrụ Decoiler na Igwe Ọdụdọ
A na-eji ihe eji achọ mma eji ejikọtara ọnụ nke ọma na obere eriri ọkụ n'ime ime na igwe kwụ ọtọ na -enye nri. N'izi arụmọrụ dị elu na sistemụ arụmọrụ dị elu, Ihe ndozi ndozi bụ ihe kachasị mma maka ngwa igwe / akụkụ ọ bụla. Combined...
Combo uncoiler larịị igwe
Combo uncoiler straightener machine bu nke eji mara oru oma ihe eji eme ya. Emere igwe a idebe udiri ihe nile di egwu nke ichoro uzo di iche. A na-enwe ekele dị ukwuu maka ịrụ ọrụ na-enweghị ntụpọ na arụmọrụ dị elu. A na-emegharị igwe ahụ ma jiri ya...
Kọmpatetị Decoiler Cum Straightener Machine
Kọmputa ihe ndozi ihe eji achọ mma mma eji ngwa eji arụ ọrụ, igwe echekwaara oghere, ọ dịkwa mma maka ụdị igwe mpempe akwụkwọ ọ bụla. Na akpaghị aka megharia oge nri dịka ọpụpụ ngwa ngwa. Leveler na acho uzo kwesiri ekwesi iji belata uzo uzo nri....
Karfe Coil Decoiler Straightener bụ nke a ma ama maka ọrụ mkpuchi kachasị mma na ijikọ ọrụ. Emere igwe a idebe udiri ihe nile di egwu nke ichoro uzo di iche. A na-enwe ekele dị ukwuu maka ịrụ ọrụ na-enweghị ntụpọ na arụmọrụ dị elu. A na-emegharị...
China Combo Decoiler Straightener Ngwa
Combo Decoiler ẹrọ igwe dị na mkpụmkpụ oghere emebebere iji gboo mkpa ndị ahịa nwere oghere na-enweghị ohere. Ọ 's smart na mfe ịkwaga na wụnye ya.
Ọ nwere ike kpuchie ma mezie eriri mpempe akwụkwọ nke metal site na obosara 50-600mm, na ọkpụrụkpụ site na 0.4-3.2mm, ịdị arọ mkpuchi site na 300kgs ruo 2000kgs.
Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị maka ngọngọ ngwaike, ngwaahịa eletrik, shei kọmputa na ndị ọzọ.
Site na nrụgide pneumatic na elu na ala na-agbatị aka na-agbazi oghere na irighiri irighiri, ọ nwere ike nweta arụmọrụ kwụ ọtọ maka ọtụtụ ụdị mpempe akwụkwọ metal.
Combo Uncoiler Straightener Decoiler Straightener jikọtara ọnụ Decoiler Cum Straightener Manual Decoiler Cum Straightener Decoiler Straightener 2 IN 1 igwe Nnukwu Nchịkwa Decoiler Cum Straightener Iron Coco Uncoiler Straightener Combined Decoiler Straightener